हालैका वर्षहरूमा मा, pelvic अङ्गहरूको क्यान्सर को घटना तेजी बढ्दै छ। यो मात्र होइन oncological रोगहरु पहिलेभन्दा बढी सामान्य भन्ने तथ्यलाई कारण छ। रुग्णता वृद्धि पहिलो कारण निदान विधि सुधार छ। अब, लगभग हरेक व्यक्ति 50 वर्ष पुरानो किराए समय समयमा क्यान्सर मार्कर निर्धारण गर्न tests। साथै, आशङ्का रोग को अवस्थामा एक गुणस्तर साधन निदान जस्तै चल्छ। एक विधि transrectal अल्ट्रासाउंड छ। यो आशङ्का क्यान्सर र pelvic अंगहरु मा भडकाऊ प्रक्रिया संग दुवै पुरुष र महिला लागि सञ्चालन गरिएको छ। पेट अल्ट्रासाउंड तुलनामा यो विधि सेंसर रोग प्रक्रियाहरू नजिक छ, किनभने थप विश्वसनीय मानिन्छ। तसर्थ, अधिकारीहरु राम्रो व्यवस्थापन विचार गर्नुहोस्।
transrectal अल्ट्रासाउंड के हो?
यो विधि अल्ट्रासोनिक कार्य आधारित छ। तपाईं थाह छ, यो इमेजिंग विधि गैर-इनवेसिव प्रक्रिया बुझाउँछ। अल्ट्रासाउंड छालहरू, मानव शरीर को Tissues असर गर्न साथै पास गर्न सक्षम छन्। Transrectal अल्ट्रासाउंड (TRUS) अध्ययन को अन्य प्रकार देखि कार्य कुनै फरक संयन्त्र छ। मात्र फरक सेन्सर गर्ने मलाशय सम्मिलित छ, र पेट को सतह मा स्थापना गरिएको छैन भन्ने तथ्यलाई मा निहित।
कारण सबै कपडे फरक गुन्जन घनत्व छ भन्ने तथ्यलाई गर्न, एक डाक्टर स्क्रिनमा अंगहरु कल्पना प्रबन्धन। भडकाऊ परिवर्तन वा कुनै पनि छाप (formations) को उपस्थिति मा, अल्ट्रासाउंड तस्वीर परिवर्तन। त्यो, एक अंग वा घनत्व आदर्श फरक तत्संबंधी एक भाग हो। दुवै hypo- र hyperechogenicity को ऊतक को संरचना परिवर्तन भएको एक रोग प्रक्रिया उपस्थिति संकेत गर्छ।
TRUS प्रोस्टेट, पेट, डगलस ठाउँ, को थैली को दृश्य लागि प्रदर्शन। यी सबै शरीर मनिटर र अल्ट्रासाउंड अन्य प्रकार (- transvaginal पेट, महिला) मा प्रदर्शित छन्। तथापि, राम्रो मलाशय इमेजिंग मा सेन्सर सेट गर्दा, यन्त्र र ऊतक बीच दूरी कम गरेर।
transrectal प्रोस्टेट अल्ट्रासोनोग्राफी लागि सङ्केत गर्छ
Transrectal प्रोस्टेट को अल्ट्रासोनोग्राफी प्रोस्टेट रोगहरु निदान को लागि एक विश्वसनीय विधि हो। यो विशेष गरी आशङ्का oncologic प्रक्रियाको अवस्थामा, अनुसन्धान को रुचि विधि हो। तैपनि, TRUS को नियुक्ति त्यहाँ एक क्यान्सर छ कि होइन। त्यसैले अग्रिम आतंक र हतार निष्कर्ष नगर्नुहोस्। तपाईं पहुँच जब पेट अल्ट्रासाउंड छालहरू Tissues (छाला, बोसो, मांसपेशीमा) को एक किसिम पास भनेर थाहा हुनुपर्छ। कि पछि मात्र तिनीहरूले प्रोस्टेट ग्रन्थि मा गिरावट। त्यसैले रोगी वजन भएको छ, विशेष गरी यदि निदान गाह्रो pathologies। Transrectal प्रोस्टेट अल्ट्रासोनोग्राफी धेरै पटक परीक्षण निकाय सेन्सर बाट दूरी कम गर्न अनुमति दिन्छ। प्रोस्टेट ग्रन्थि को मलाशय गर्न सीमा पछि। TRUS लागि सङ्केत गर्छ निम्न अमेरिका हो:
सौम्य prostatic शिक्षा। यो विकृति एकदम पुरानो मानिसहरू सामान्य छ। तथ्याङ्क अनुसार, प्रोस्टेट adenoma हरेक अन्य 50 वर्ष पछि बलियो सेक्स को प्रतिनिधि मा पाइन्छ।
प्रोस्टेट क्यान्सर। आशङ्का TRUS oncological रोग लागि निदान को मुख्य विधि हो। यो अन्तर्गत भन्ने तथ्यलाई कारण छ एक अल्ट्रासाउंड को नियन्त्रण अध्ययन प्वाल पार्ने काम शरीर प्रदर्शन। तसर्थ, चिकित्सक को अल्ट्रासाउंड तस्वीर मूल्यांकन र एक बायोप्सी कार्य गर्दछ। अर्थात् घाउ को बार सामाग्री (कपडे) उत्पादन गर्छ।
प्रोस्टेट मा सर्जरी लागि तयारी।
पुरुष बाँझोपन। prostatitis - अक्सर खाद गर्न नसक्नुको पुरानो सुनिंनु को पृष्ठभूमिमा विकसित।
रोगी दुखाइ को गुदा गर्न विस्तार, को गुप्तांग र कमर र तिध्रा बिचको भाग क्षेत्रमा complains यदि प्रोस्टेट को Transrectal अल्ट्रासाउंड गरिन्छ। साथै, अध्ययन urination र फटना, दुर्बलता उल्लङ्घन बाहिर।
महिला मा transrectal अल्ट्रासोनोग्राफी लागि सङ्केत गर्छ
Transrectal अल्ट्रासाउंड मानिसहरू भन्दा महिला मा कम प्राय गरिन्छ। अक्सर, निदान को यो विधि आशङ्का क्यान्सर को अवस्थामा गरिन्छ। साथै, यदि त्यहाँ जानिन्छ, महिला र पुरुष मा श्रोणि संरचना केहि फरक छ डगलस ठाउँ, abscesses, र यति मा। डी मा भडकाऊ प्रक्रिया को likelihood छ TRUS प्रदर्शन। को गर्भाशय र appendages को परीक्षा प्रायजसो, थप प्राय गरिन्छ कि दिइएको, हामी सिफारिस एक transvaginal अल्ट्रासाउंड। तर, केही अवस्थामा मा, मलाशय मार्फत अङ्गहरूको दृश्य रोग बारे थप जानकारी दिन्छ।
महिला मा transrectal अल्ट्रासाउंड लागि संकेत को डगलस ठाउँ अध्ययन गर्न छ। यो मलाशय र गर्भाशय बीच स्थित पेरिटोनियम खल्ती प्रतिनिधित्व गर्दछ। तसर्थ, राज्य TRUS adrectal फाइबर र प्रजनन अङ्गहरू को पछिल्लो सेट मूल्याङ्कन गर्न। यसलाई निम्न अवस्थामा बाहिर छ:
आशङ्का विद्रधि डगलस ठाउँ। अक्सर यो सुनिंनु appendicitis र peritonitis को जटिलताहरुलाई एक परिणाम हो।
को मलाशय को Uterine क्यान्सर रोग विज्ञान।
आशङ्का metastases adrectal फाइबर। यो गैस्ट्रिक गर्दा ट्यूमर हुन्छ।
को मलाशय को सुनिंनु।
को गर्भाशय पछाडि भित्तामा सौम्य growths।
दुवै महिला र पुरुष TRUS को urogenital अंगहरु अवस्था आकलन गर्न प्रयोग गरिन्छ। तैपनि, प्रायजसो, तिनीहरूले एक transabdominal दृष्टिकोण द्वारा जांच छन्।
TRUS द्वारा थैली रोगहरु को निदान
को pelvic गुहा मा माथि अंगहरु अलग्गै को थैली छ। यो मलाशय अगाडि स्थित छ। यो गर्भाशय कवर गर्न महिला पहुँच छ। तसर्थ, transrectal को थैली को अल्ट्रासाउंड अक्सर मानिसहरू लगे। यो आशङ्का ट्यूमर, सौम्य र भडकाऊ infiltrates को अवस्थामा बाहिर छ। महिला TRUS थैली समारोह यदि टास्ने प्रक्रिया श्रोणि मा वा गम्भीर मोटोपना। साथै, यो विधि योनी सेन्सर मा सम्मिलित hymen, गर्न क्षति रोक्न प्रयोग गरिन्छ।
transrectal अल्ट्रासोनोग्राफी गर्न Contraindications
केही अवस्थामा, transrectal अल्ट्रासोनोग्राफी मा सिफारिस गरिएको छैन। यो निदान विधि गर्न निरपेक्ष contraindication atresia गुदा छ। यो जन्मजात malformation, wherein अफलाइन गुदा। को समान anomalies जीवनको प्रारम्भिक दिनमा निदान। अन्य contraindications सापेक्ष छन्। यो एक आपतकालीन अनुसन्धान सञ्चालन गरिएको छ भन्ने हो। यद्यपि, यो अन्य निदान विधि प्रतिस्थापन गर्न राम्रो छ। नातेदार contraindications लागि समावेश:
ताजा टूट मलाशय। यो रोग मा, कुनै पनि हेरफेर सञ्चालन transrectal निषेधित। तर, प्रदर्शन TRUS सम्भव, को दरार (तीव्र अवस्थाको राहत) को उपचार पछि।
बाहिर र मलाशय भित्र inflamed बवासीर को उपस्थिति। यस मामला मा, transrectal अल्ट्रासाउंड जांच को परिचय किनभने भास्कुलर चोट को जोखिम देखाइएको छैन।
को मलाशय को सर्जिकल हेरफेर, अध्ययन को गन्तव्य अघि छिट्टै सञ्चालन। फैटी ऊतक, साइनस पर्चाहरू, आदि को उद्घाटन र जल ...: यी कुनै पनि सर्जरी समावेश
Transrectal अल्ट्रासाउंड: अध्ययनको लागि तयारी
कुनै पनि अध्ययन संग, transrectal प्रदर्शन रूपमा, TRUS तयारी आवश्यक छ। को pelvic अंगहरु को सामान्य दृश्य हासिल गर्न, मलाशय पूर्व-साफ हुनुपर्छ। यो अन्त गर्न, प्रक्रिया अघि केही घण्टा एक रेचक औषधि वा enema लिनुपर्छ। अध्ययन लागि संकेत को मलाशय को रोगहरु छन् भने, मसलादार खाना, नरम र मादक पेय को आहार देखि बहिष्कृत गर्नुपर्छ। प्रदर्शन TRUS प्रोस्टेट पूर्व-आहार अघि आवश्यक छैन। अध्ययन को वस्तु थैली छ भने, यो भर्न आवश्यक छ। यो उद्देश्य लागि, पानी को 1-2 लिटर पिउन रोगी अघि निदान प्रक्रिया।
अनुसन्धान उपकरण प्रदर्शन
Transrectal अल्ट्रासोनोग्राफी विभिन्न स्थान मा प्रदर्शन। प्रोस्टेट ग्रन्थि मा एक राम्रो नजर गर्न, रोगी आफ्नो बायाँ छेउमा झूठ गर्न आग्रह गरिएको छ। एकै समयमा आफ्नो खुट्टा को घुँडा मा बाङ्गो र आफ्नो पेट विरुद्ध थिचिएको गर्नुपर्छ। महिला मा Transrectal pelvic अल्ट्रासाउंड अक्सर proctology कुर्सी (वा gynecological) गर्न गरिन्छ। एउटै तरिकामा अध्ययन थैली सञ्चालन गरिएको छ। केही अवस्थामा, बोजेम्यान स्थिति लिन रोगी प्रस्ताव। अक्सर - को मलाशय को आशङ्का विकृति लागि।
को अल्ट्रासोनिक सेन्सर गुदा नहर प्रविष्ट गर्न अघि, Vaseline वा विशेष स्नेहक संग गंदा छ। यो साधन6सेमी को एक गहिराई गर्न लुमेन मा शुरू। गुदा नहर, sphincters, अंग पर्खालहरु निरीक्षण छ। अर्को हामी प्रोस्टेट र seminal vesicles छानबीन। को थैली - महिलाहरु मा, मलाशय को परीक्षा पछि गर्भाशय र डगलस ठाउँ, त्यसपछि को posterior fornix भिजुएलाइज्ड छ। सबै परिणाम स्क्रिनमा स्थिर छन्। त्यसपछि मिसिन ध्यान मलाशय हटाइयो।
transrectal अल्ट्रासोनोग्राफी को लाभ
TRUS को लाभ समावेश:
विकिरण जोखिम को अभाव।
को pelvic अङ्गहरूको दृश्य सुधार। को मलाशय मार्फत उच्च जानकारी अल्ट्रासाउंड, प्रोस्टेट को करीब निकटता र पेट पर्खाल मा उपलब्ध छ जो बोसो ऊतक को एक मोटी पत्र को अभाव मार्फत हासिल छ।
transrectal अल्ट्रासाउंड को परिणाम
कारण TRUS को विधिमा यो pelvic अंगहरु र metastases adrectal फाइबर को ट्यूमर निदान गर्न सम्भव छ। यसबाहेक, यो विधि संग, अध्ययन आकार, मोटाइ र प्रोस्टेट को स्थान, मूत्राशय अनुमान। भडकाऊ प्रक्रिया र शिक्षा एक hypo- वा hyperechoic ऊतक खण्डहरू रूपमा मनिटर मा प्रदर्शित। को अल्ट्रासाउंड-तस्वीरमा निष्कर्ष कार्यात्मक निदान, उरोलोजस्त, स्त्रीरोग विशेषज्ञ कार्य गर्दछ।
मान्छे वृद्ध र मर रहेको छ किन
Osteon - हड्डी को एक संरचनात्मक एकाइ: संरचना र कार्य
महिला मादक पदार्थ दुर्वेसनी उपचार - केही असम्भव छ!
गेस्ट हाउस "gonna" (Gelendzhik) मा आराम: वर्णन, यात्री समीक्षा
अगाडि ढोका transoms स्थापना: प्रकार र विधिहरू
"द काल्पनिक लेखक" यूजीन Sazonov: जीवनी र काम
सस्ता एनालग "Citovir"
गोदाम र भण्डारण स्पेस योजना
कुकुर लागि Reusable डायपर - यो सुविधाजनक व्यावहारिक, स्वच्छ छ